2017 – Year – Burmese Subtitle 6.0
Wolf Warrior2(2017) Wolf Warrior2(2017) စစ်ပွဲနောက်ခံ အက်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် Wolf Warriors II သည် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း၌ ရုံဝင်ငွေအများဆုံး ရရှိသော ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လာပြီး ရုံတင်ပြသခဲ့သည့် ၁၂ရက်အတွင်း ယွမ်ငွေ ၃.၄၄ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၅၀၆ သန်း) ခန့် ရရှိခဲ့သောကြောင့် အအောင်မြင်ဆုံး ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါဇာတ်ကားကို မင်းသားဝူကျင်းက ဒါရိုက်တာအနေနှင့်ရော ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေဖြင့်ပါ ဦးဆောင် ရိုက်ကူးထားပြီး သူနှင့်အတူ အခြားသရုပ်ဆောင် ကြယ်ပွင့်များဖြစ်ကြသော ဖရန့်ခ်ဂရီလို၊ ဆယ်လီနာဂျိတ်၊ ဝူဂန်းနှင့် ကျန်ဟန်တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြသည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် အာဖရိကန်စစ်ပွဲဇုံအတွင်းသို့ အမှတ်မထင်ရောက်ရှိသွားသော တရုတ်စစ်သားများ အနေဖြင့် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ရပုံအား ဇာတ်အိမ်တည်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Wolf Warriors II ကို လွန်ခဲ့သောဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က စတင်ပြသခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရုံဝင်ငွေဇယားတွင် ထိုနေ့ကတည်းက ထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် ယနေ့အချိန်ထိ ရရှိခဲ့သော ရုံဝင်ငွေမှတ်တမ်းများ ...
IMDB: 6.0/10 6,236 votes
Fifty Shades Darker (2017) Fifty Shades Darker (2017) အခုထွက်​တဲ့ Video က ၁၅မိနစ်​စာ​တောင်​ ဖျက်​ထားပါတယ်​ ဒီ​တော့ တကယ်​့အခန်​း​တွေ(ကွကိုယ်​သိ​နော်​)ကနည်​းနည်​း​လေးပါပါတယ်​ ။ 2015 ခုနှစ်မှာ အပေါက်ဆုံးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲကတစ်ခု.... Erotic Romance ရဲ့ပုံစံကိုပီပီပြင်ပြင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Fifty Shades of Grey ဟာ စာအုပ်ရော ရုပ်ရှင်ရောဝင်ငွေကောင်းပြီးနာမည်ကြီးတာ သိပ်မဆန်းပါဘူး.... (မင်းသားကလဲ အတော်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းသလို မင်းသမီးကလဲ အတော်လှတာကိုး...) အခုဆိုရင်ဖြင့် Fifty Shades of Grey ရဲ့အဆက် Fifty Shades Darker ဟာ 2017 February မှာရုံတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ ့ရဲ့အဆက်က ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးသိချင်သူများအတွက် Preview လေးရေးပေးပြီးတော့ Fifty Shades of Grey ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Sam Taylor Johnson ဘယ်အခန်းတွေကိုချန်လှပ်ရိုက်ကူးခဲ့သလဲဆိုတာကိုလဲဝေမျှချင်တာပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ EL.James ရဲ့ Fifty Shades Trilogy မှ ...
IMDB: 4.6/10 86,588 votes
47 Meters Down (2017) 47 Meters Down (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး မက်ဆီကိုနိုင်ငံကို အလည်ထွက်လာတဲ့ ညီအမနှစ်ယောက် ငါးမန်းသွားကြည့်ဖို့ ပင်လယ်ထဲ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့အလှည့်ရောက်မှ ငါးမန်းလှောင်အိမ်က ကြိုးပျက်ပြီး သမုဒ္ဒရာအောက်ခြေ ၄ရမီတာကို ကျသွားကာ သူတို့ ပိတ်မိသွားခဲ့တော့တယ်။ လေO2ကလဲ တစ်နာရီစာလောက်ပဲကျန်တော့တယ် ပြီးတော့ ကြီးမားတဲ့ငါးမန်းဖြူကြီးတွေကလဲ အနားမှာ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတာ သူတို့ ရှင်သန်ဖို့က တိုက်ခိုက်မှရမယ်။ ကြားထဲ လှေနဲ့ အရမ်းဝေးလွန်းသွားတော့ အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့စက်က အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ သူတို့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားကြမလဲ??? ငါးမန်းတွေရန်ကို ဘယ်လို တိုက်ခိုက်ကြမှာလဲ??? သူတို့ အသက်ရှင်မှာလား??? ဒါမှမဟုတ် ငါးမန်းစာပဲ ဖြစ်သွားမလား??? ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရအောင် Review Credit
IMDB: 5.6/10 44,775 votes
Baby Driver (2017) Baby Driver (2017) သည် IMDb 7.7/10 Rotten Tomatoes 93% Metacritic 86% Google users 91% ဒါရိုက်တာ Edgar Wright ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Ansel Elgort, Jon Bernthal, Jon Hamm တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Music ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ.. ရာဇဝတ်ကောင်သူဌေးတစ်ဦးနဲ့ အတူတူအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက် လူငယ်ဒရိုင်ဘာလေးတစ်ဦးဟာ သူကိုယ်တိုင် ဘဝသတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ ပြန်လည်ကြိုးစားပုံကို အက်ရှင်ခပ်မြူးမြူးကို ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါခင်ဗျာ….. Review Credit
IMDB: 7.6/10 401,716 votes
Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017) Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017) Rey develops her newly discovered abilities with the guidance of Luke Skywalker, who is unsettled by the strength of her powers. Meanwhile, the Resistance prepares to do battle with the First Order. File Size – 2.41 GB Quality- Blu Ray 1080p 8CH Running Time – 2hr 31min Format – mkv Genre – Action, Adventure, Fantasy Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – ...
Pitch Perfect3(2017) Pitch Perfect ဆိုတဲ့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ အလန်းစားမြူးဇစ်တွေနဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဆိုတာ ပြောစရာမလိုအောင် သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီတစ်ခါကားလေးမှာတော့ ဘယ်လာအဖွဲ့ဝင်တွေ အကုန်လုံးကကျောင်းတွေပြီးလို့ ဘွဲ့ရသွားကြပေမဲ့လဲ သီချင်းအတူဆိုရဖို့ကို အမြဲလိုချင်နေခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ပြန်ဆုံတဲ့ပွဲမှာ သီချင်းဆိုရမယ်အထင်နဲ့ သွားခဲ့ကြပေမဲ့ မဆိုရလို့ ကြိမ်မနိုင်ခဲမရဝမ်းနည်းခဲ့ရပြီး မရရတဲ့နည်းနဲ့ သီချင်းအတူဆိုကြဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်သူတို့အဖွဲ့ သီချင်းဆိုရတဲ့ နေရာကတော့ ခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲ စစ်တပ်ထဲက စစ်သားတွေကို ဖျော်ဖြေရတဲ့ပွဲမှာပါ။ ဒီပွဲမှာ ဆိုခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လဲ ထုံးစံအတိုင်း အပြိုင်အဆိုင် အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရပုံတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ရိုက်ကူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ I am the one သီချင်းကို ဂျက်စတင်ဘီဘာနဲ့တွဲဆိုခဲ့ပြီး billboard မှာနာမည်အရမ်းကြီးခဲ့တဲ့ ဒီဂျေကားလက်လဲ ဒီကားလေးထဲမှာ ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် ထူးခြားတာတစ်ခုက အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ မိသားစုbackground အကြောင်းလေးတွေပါ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားလို့ အရင်ကားတွေလိုပဲ ပရိသတ်တွေကို သေချာပေါက် ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါပဲ။ Review Credit to CM
IMDB: 5.8/10 50,720 votes
Memoir ofaMurderer (2017) Memoir ofaMurderer (2017) Memoir of murderer ရုပ်ရှင်ကားလေးဟာ ၂၀၁ရခုနှစ်မှာကိုရီးယားဒါရိုက်တာ Won Shin Yun ဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ သဲထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ရှင်ကားကို စာရေးဆရာ Kim Yong Ha ရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဝတ္တုစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ A murderer’s guide to memorizarion ကို မှီငြမ်းပြီးရုပ်ရှင်အဖြစ် ဖန်တီးထားတာပါ။ အဓိက ဇာတ်ဆောင်များအနေနဲ့ Sol Kyun Gul နဲ့ Kim Nam Gil ၊ ဇာတ်ပို့အဖြစ် Kim Seol hyun နဲ့Oh Dal Su တို့က ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ Showbox/Mediaplex မှထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးထားပြီး ဇာတ်လမ်းကို မိနစ်ပေါင်း ၁၂၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရင်သတ်ရှုမောခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ Sol Kyun Gul ကိုအယ်လ်ဇိုင်းမားစိတ်ကျရောဂါခံစားနေရတဲ့စိတ္တဇလူသတ်သမား တရားခံ Serial Killer ကြီးKim ...
IMDB: 7.1/10 4,720 votes
Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) ၁၉၉၅ လောက်ကတည်းက ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးခဲ့ပြီးသား Jumanji ဇာတ်လမ်းပြီးနောက် သီးခြားဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့ ထပ် ထွက်လာတာမို့ ရသအသစ်အ ဆန်းလေး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိ သတ်တွေ သဘောကျကြမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းအဓိကအကြောင်းအရာကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးလေးယောက် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားကာ ဂျူမန်းဂျိ ကမ္ဘာထဲရောက်သွားပြီး စွန့်စားခန်းမျိုးစုံ ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ အကြောင်းလေး တင်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ကာလက အဲလက်စ် ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင် လေးဟာ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်း ဘုတ်ပြား လေးကို ကမ်းခြေနားက ကောက်ရ ခဲ့ပေမယ့် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေပဲ ကစား ဖြစ်နေတာမို့ ဂိမ်းမကစားဖြစ်ဘဲ သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ် ညမှာ ဂျူမန်းဂျိ ဘုတ်ပြားထဲက ဂိမ်းတွေဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး အဲလက်စ်က ဂိမ်း စက်ဖွင့်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ သူပါပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ နှစ် ၂၀ လောက်ကြာခဲ့ပြီး နောက်မှာတော့ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းစက် က ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ စပန် ဆာ၊ ဘယ်သန်နီ၊ မာသာနဲ့ ဖရစ်ဂျ်ဆိုတဲ့ ...
IMDB: 6.9/10 282,165 votes
Stronger (2017) ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဘော်စတွန် မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ခြေထောက် ၂ဖက်စလုံးဆုံးရံှုးလိုက်ရတဲ့ Jeff Bauman ဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနေနဲ့တော့ Jeff တစ်ယောက် မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲဝင်ရင်း မထင်မှတ်ထားဘဲပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး သတိပြန်လည်လာချိန်မှာတော့ ခြေထောက် ၂ချောင်းစလုံး မရှိတော့တဲ့အနေအထားမှာဖြစ်သွားခဲ့တယ်... ဒီအချိန်မှာအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလည်း သူလို့အထူးမခြားနား ဒဏ်ရာအသီးသီးတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့သူ့ကို ကယ်တင်သူပေးသူကိုလည်း တခြားကိုကူညီပေးဖို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်... ဒီလိုခြေထောက်၂ချောင်းစလုံးမရှှိတော့တဲ့ Jeff တစ်ယောက် ဘဝကြီးကိုဘယ်လိုရှေ့ဆက်လျှောက်ခဲ့လဲဆိုတာ BS ကပရိတ်သတ်ကြီး ကွာလတီအလန်းစားနဲ့ ရှုစားလိုက်ကြပါဗျာ IMDB 6.9 လက်ရှိချိန်ထိရရှိထားပြီးတော့ Biography ကားကောင်းလေးတစ်ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး...
IMDB: 6.9/10 36,646 votes